Faits-Divers – Page 1182 – Midi Madagasikara
Foulpointe : Fihinanana antantsa, 1 maty ary am-polony naiditra hopitaly
Redaction Midi Madagasikara 14 février 2014 Foulpointe, hopitaly, Mahavelona, Toamasina
Tao Antaratasy no nitrangana faharariana vokatry ny fihinana antsantsa. olona 5 no voalaza fa narary tamin’ izany ka isan’izany ny rangahy 60 taona sy ny zanany iray ary vehivavy sy zanany 2 hafa koa. Marihina fa ireo izay nihinana ny lohany sy ny taovany ireto narary ireto. Ny roa volohany moa dia notsaboina tao amin’…
Ambatondrazaka : Sarona ny menaka rongony 20 litatra
Redaction Midi Madagasikara 14 février 2014 Ambatondrazaka, Randrianambinina Honorat, rongony
Tao anatin’ny vela-pandriky ny polisim-pirenena ireto andian’olona mpivarotra menaka rongony ka sarona avokoa izy ireo. Menaka rongony 20 litatra no heno fa haparitaka eto Ambatondrazaka. Tao anatin’ny 5 andro no nitsongoana dia ireo olona ireo, asa nataon’ny polisy Randrianambinina Honorat (Rakom ). Saron’izy ireo tamin’izany ny menaka rongony 10 litatra mahery ka vehivavy no atidoha…
Antsirabe : Zazavavy kely naratra mafy nodomina taxi-be
Itrangana loza matetika ireo taxi-be miasa eto Antsirabe tato ho ato. Vao tsy ela akory izay no namoizana ain’olona ny zotra iray, nisy ny nifatratra an-tantatra. Izao indray dia zotra laharana faha 10 no nandona zazavavy kely iray teo amin’ny sampanana Ambohimiandrisoa, omaly maraina tokony ho tamin’ny 11 ora teo ho eo. Nirahin’ny reniny…
Itaosy : Namoy ny ainy ilay vehvavy voaendaka tamin’ny alahady
Re izao tamin’ny vaovao voaray teny anivoan’ny hopitaly fa namoy ny ainy omaly ilay ramatoa voaendaka tamin’ny alahady lasa teo teny amin’ny faritr’Itaosy. Ireo ratra maro nahazo azy no nitarika ny fahafatesany. Tsiahivina fa olona roa, vehivavy sy lehilahy, no nifanehitra tamina andian-jiolahy. Samy hamonjy fotoam-pivavahana maraina izy ireo. Avy hatrany dia nendahan’ireo olon-dratsy ry…
← Previous 1 … 1 181 1 182 1 183 … 1 232 Next →